ရန်ကုန်- ကလေး High class ကားမှောက်မှုမှာ ပျံလွန်တော်မူသွားကြတဲ့ သာသနာ့ကြယ် လေးပွင့် - Uptodate MM
ရန်ကုန်- ကလေး High class ကားမှောက်မှုမှာ ပျံလွန်တော်မူသွားကြတဲ့ သာသနာ့ကြယ် လေးပွင့်
ရန်ကုန်- ကလေး High class ကားမှောက်မှုမှာ ပျံလွန်တော်မူသွားကြတဲ့ သံဃာတော်တွေဟာ မဟာဝိသုဒ္ဓါရုံတိုက်သစ်ဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တတေဇဝန္တ၏ တပည့်တော်တွေ ဖြစ်ကြပါတယ် . . .ဆရာတော်ကြီးရဲ့ နောက်ဆုံးခရီးကို ပို့ပြီး လို့ အပြန်မှာ ခုလိုဖြစ်သွားကြတာဖြစ်ပါတယ်
ဒါကို သူတို့နဲ့ ခင်မင်ရင်းနှီးတဲ့ ဆရာတော် အရှင်ဇဋိလက ခုလိုရင်ဖွင့်ထားပါတယ်
အကြွစောလှပါလား တပည့်တော်ရယ် ပြန်တော့မယ်ဆိုပီး ဆရာ့ထံလာနှုတ်ဆက်သွားကြသေးတယ် ၅ပါးလုံးပဲ အော် သေမင်း * သင်မဖိတ်လည်း ငါ့စိတ်နဲ့ငါ သင်ရှိရာသို့ လာမည်မနှေး ကတိပေး၏ * တဲ့ *သင်မခေါ်လည်း အဖော်မပါ တစ်ယောက်တည်းသာလျှင် လာမည်ဆက်ဆက် တရက်ရက်တည်း* တဲ့
ဘဝနတ်ထံပျံလွန်သော ဦးပညာစာရ ဓမ္မာစရိယတန်းသစ်ချောက်ရွာ ကလေးဝမြို့နယ်
ဘဝနတ်ထံပျံလွန်သော ဦးခေမိန္ဒ ပထမကြီးတန်း မြောက်ခင်ရန်းရွာ ဂန့်ဂေါမြို့နယ်
ဘဝနတ်ထံပျံလွန်သော ရှင်ပညောဘာသ ဓမ္မာစရိယတန်း ရွာဟောင်းရွာ ဘုတလင်မြို့နယ်
ဘဝနတ်ထံပျံလွန်သော ရှင်ဇောတိက ပထမကြီးတန်း မယ်မဲရွာ မင်းကင်းမြို့နယ်
ကားသမား/ကားအုံနာ တို့၏ ပေါ့ဆမှုကြောင့် သံဃာများ ပျံလွန်တော်မူရပြီ…။
ဘဝနတ်နန်းစံမြန်းတော်မူသော ကျေးဇူးရှင် မဟာဝိသုဒ္ဓါရုံတိုက်သစ်ဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တတေဇဝန္တ၏ နောက်ဆုံးခရီးကို ပို့ပီးလို့ ရန်ကုန်အပြန် 6G/4—High class(ကလေး. -ရန်ကုန်)ခရီးသည်ယာဉ်ဖြင့် စီးနင်းလိုက်ပါလာသော မဟာဝိသုဒ္ဓါရုံဝံသ သံဃာ ရဟန်းတော် ဦးပညာစာရ (ဓမ္မာစရိယတန်း)သစ်ချောက်ရွာ ကလေးဝမြို့နယ်၊ သာမဏေရှင်ဇောတိက ပထမကြီးတန်း မယ်မဲရွာ မင်းကင်းမြို့နယ် ၊ရှင်ပညောဘာသ(ဓမ္မာစရိယတန်း)ရွာဟောင်းရွာ ဘုတလင်မြို့နယ် နှင့် ဦးခေမိန္ဒ ပထမကြီးတန်း မြောက်ခင်ရန်းရွာ ဂန့်ဂေါမြို့နယ် တို့ စုစုပေါင်း လေးပါး ပျံတော်မူ ။
မတ်လ(၅)ရက်နေ့ နံနက်(၀၆၀၀)နာရီအချိန်ခန့် နေပြည်တော်-ရန်ကုန်လမ်း မိုင်တိုင်အမှတ် ၇၇/၃-၇၇/၄ ကြား တွင်ယာဉ်မောင်း ဥိးဝင်းထွန်း.၃၈ နှစ်. နယ်မြေ.၂ .ကလေးမြို့ နေသူမောင်းနှင်လာသည့် 6G/4—High class(ကလေး. -ရန်ကုန်)ခရီးသည်ယာဉ်ဟာ ပန်းပွိုင့်မရှိ ပြောင်ချောဖြစ်နေတဲ့ နောက်ယာဘက်တာရာပွင့်ထွက်ပြီး တိမ်းမှောက်ခဲ့ရပါသည်။
အသုံးပြုရန်မသင့်တော့သော ပြောင်ချောတာယာဟာ ဝန်များလေးနစ်အောင် တင်ထားမှုကြောင့် ကားသွားနေစဉ် ခံနိုင်မရှိတော့ပဲ ပွင့်ထွက်ပြီး မထိန်းနိုင်ဖြစ်ကာ ကားမှောက်ခဲ့ရတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ပန်းပွိုင့်မရှိတဲ့နောက်ယာဘက်ဘီးပေါက်လို့ ကားဟန်ချက်ပျက်ချိန်မှာလည်း ကားသမားဟာ သတိမရှိ အိပ်ငိုက်နေလို့ ဘယ်လိုထိန်းရမည်ကို မဆုံးဖြတ်နိုင်တော့ပဲ လမ်းလယ်ကျွန်း Guard rails တန်းအား ဝင်ရောက်တိုက်မိကာ အရှိန်မထိန်းနိူင်ဘဲ လမ်းဘေးမြေသားလမ်းတွင် တစ်စောင်းအနေအထားဖြင့် ယခုလိုတိမ်းမှောက်အဖြစ်ဆိုးသွားရတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကားမထွက်ခင် ယာဉ်၏ကြံ့ခိုင်မှုကို သေချာမစစ်ဆေးသော တာဝန်မဲ့သူတို့ကြောင့် လူ့အသက်တွေ ပေးခဲ့ရပါပြီ။နောက်နောင် လူအသက်တွေ အချည်းနှီး မဖြစ်စေဖို့ ကားသမားတွေ ကားအုံနာတွေမှ ဂရုစိုက်ကြပါ။
ရန္ကုန်- ကေလး High class ကားမွောက္မွုမွာ ပ်ံလြန်တ္မောူသြားကြတဲ့ သံဃာတော်တြေဟာ မဟာဝိသုဒ္ဓါရုံတိုက်သစ္ဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တတေဇဝန္တ၏ တပည့်တော်တျြေဖစ်ကြပါတယ် . . .ဆရာတော်ကြီးရဲ့ နောက္ဆုံးခရီးကို ပို့ပြီး လို့ အျပန္မွာ ခုလျိုဖစ်ြသားကြတျာဖစ္ပါတယ်
ဒါကို သူတို့နဲ့ ခင္မင်ရင်းနွီးတဲ့ ဆရာတော် အရွင္ဇဋိလက ခုလိုရင္ဖြင့္ထားပါတယ်
အကြေစာလွပါလား တပည့်တော်ရယ်ျပန်တော့မယ္ဆိုပီး ဆရာ့ထံလာနွုတ္ဆက်ြသားကြေသးတယ် ၅ပါးလုံးပဲ အော် သေမင်း * သင္မဖိတ္လည်း ငါ့စိတ္နဲ့ငါ သင်ရွိရာသို့ လာမည္မေနွး ကတိပေး၏ * တဲ့ *သင္မေခ်ါလည်း အေဖ္မာပါ တစ်ယောက္တည်းသာလျွင် လာမည္ဆက္ဆက် တရက်ရက္တည်း* တဲ့
ဘဝနတ္ထံပ်ံလြန်သော ဦးပညာစာရ ဓမ္မာစရိယတန်းသစ်ခေ်ာက်ြရာ ကေလးဝမြို့နယ်
ဘဝနတ္ထံပ်ံလြန်သော ဦးခေမိန္ဒ ပထမကြီးတန်းျေမာက္ခင်ရန်းရြာ ဂန့်ဂေါမြို့နယ်
ဘဝနတ္ထံပ်ံလြန်သော ရွင္ပေညာဘာသ ဓမ္မာစရိယတန်း ရြာဟောင်းရြာ ဘုတလင်မြို့နယ်
ဘဝနတ္ထံပ်ံလြန်သော ရွင်ဇောတိက ပထမကြီးတန်း မယ္မဲရြာ မင်းကင်းမြို့နယ်
ကားသမား/ကားအုံနာ တို့၏ ပေါ့ဆမွုကြောင့် သံဃာမ်ား ပ်ံလြန်တ္မောူရပြီ…။
ဘဝနတ္နန်းဈံမန်းတ္မောူသော ကေ်းဇူးရွင် မဟာဝိသုဒ္ဓါရုံတိုက်သစ္ဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တတေဇဝန္တ၏ နောက္ဆုံးခရီးကို ပို့ပီးလို့ ရန္ကုန်အျပန် 6G/4—High class(ကေလး. -ရန္ကုန်)ခရီးသည်ယာဉ်ျဖင့် စီးနင်းလိုက္ပါလာသော မဟာဝိသုဒ္ဓါရုံဝံသ သံဃာ ရဟန်းတော် ဦးပညာစာရ (ဓမ္မာစရိယတန်း)သစ်ခေ်ာက်ြရာ ကေလးဝမြို့နယ်၊ သာမေဏရွင်ဇောတိက ပထမကြီးတန်း မယ္မဲရြာ မင်းကင်းမြို့နယ် ၊ရွင္ပေညာဘာသ(ဓမ္မာစရိယတန်း)ရြာဟောင်းရြာ ဘုတလင်မြို့နယ် နွင့် ဦးခေမိန္ဒ ပထမကြီးတန်းျေမာက္ခင်ရန်းရြာ ဂန့်ဂေါမြို့နယ် တို့ စုစုပေါင်း လေးပါး ပ်ံတ္မောူ ။
မတ္လ(၅)ရက်နေ့ နံနက်(၀၆၀၀)နာရီအခ်ိန္ခန့် နျေပည်တော်-ရန္ကုန္လမ်း မိုင္တိုင်အမွတ် ၇၇/၃-၇၇/၄ ကြား တြင်ယာဉ်မောင်း ဥိးဝင်းထြန်း.၃၈ နွစ်. နယ်ျေမ.၂ .ကေလးမြို့ နေသူမောင်းနွင္လာသည့် 6G/4—High class(ကေလး. -ရန္ကုန်)ခရီးသည်ယာဉ်ဟာ ပန်းပြိုင့္မရွိျေပာင်ခေ်ျာဖစ်နေတဲ့ နောက်ယာဘက္တာရာပြင့်ထြက်ပြီး တိမ်းမွောက္ခဲ့ရပါသည်။
အသုံျးပုရန္မသင့်တော့သောျေပာင်ခေ်ာတာယာဟာ ဝန္မ်ားလေးနစ်အောင် တင္ထားမွုကြောင့် ကားသြားနေစဉ် ခံနိုင္မရွိတော့ပဲ ပြင့်ထြက်ပြီး မထိန်းနိုင်ျဖစ္ကာ ကားမွောက္ခဲ့ရတျာဖစ္ပါတယ်။
ပန်းပြိုင့္မရွိတဲ့နောက်ယာဘက္ဘီးပေါက္လို့ ကားဟန္ခ်က္ပ်က္ခ်ိန္မွာလည်း ကားသမားဟာ သတိမရွိ အိပ်ငိုက်နေလို့ ဘယ္လိုထိန်းရမည္ကို မဆုံျးဖတ္နိုင်တော့ပဲ လမ်းလယ္ကျနြ်း Guard rails တန်းအား ဝင်ရောက္တိုက္မိကာ အရွိန္မထိန်းနိူင္ဘဲ လမ်းဘေျးေမသားလမ်းတြင် တစ်စောင်းအေနအထာျးဖင့် ယခုလိုတိမ်းမွောက်အျဖစ္ဆိုးသြားရတျာဖစ္ပါတယ်။
ကားမထြက္ခင် ယာဉ်၏ကြံ့ခိုင္မွုကို သေခ်ာမစစ်ဆေးသော တာဝန္မဲ့သူတို့ကြောင့် လူ့အသက်တြေ ပေးခဲ့ရပါပြီ။နောက်နောင် လူအသက်တြေ အခ်ည်းနွီး မျဖစ်စေဖို့ ကားသမားတြေ ကားအုံနာတြေမွ ဂရုစိုက်ကြပါ။
ကိုရိုနာ ဗိုင်း ရပ် စ်ေ ကြာင့် မ န်းရွှေ စက်ေ တာ် သွား မည့်သူ များ အ သက် ကို ဥာဏ်ေ စာင့် နိုင် ကြ ပါစေ
ကိုယ့်နွားကိုယ် နိုင်ေ အာင်ေ ကျာင်း ပြီး မိန်းမ ချင်း ကိုယ် ချင်း စာ သင့် ပါ တယ် အ ခုေ နာက် ပိုင်း လူေ တွ က တစ် ခု ခု ဆို ဥပေ ဒနဲ့ မရှင်းကြတော့ ဘူး
မုံရွာ မြို့တွင် ညအ ချိန်မတော် တွေ့ဆုံ ကြ သည့် စုံ တွဲ များ ကို ရဲတပ် ဖွဲ့မှ ပညာပေး
မတ် ၃၁ ရက်တွင် ဂျပန်နိုင်ငံ တိုကျိုမြို့၌ ယှဉ်ပြိုင်မည့် အောင်လအန်ဆန်နှင့် တွေ့ဆုံမေးမြန်း